COPAC Yozeya Chirongwa Chayo neMasangano Akazvimirira
Nyamavhuvhu 05, 2010
Mutongi wedare ramejasitiriti kwaMutare, VaFabian Feshete, vabvisisa mari yechibatiso inoita madhora makumi mashanu ekuAmerica kumushandi weCOPAC, uyo akasungwa neChitatu achipomerwa mhosva yekuita zvinonyadzisa.
VaKudakwashe Munengiwa, vapihwa mukana wekubvisa mari yechibatiso, kuitira kuti nyaya yavari kupomerwa, itongwe vachibva kumba. VaMunengiwa vabvisiswa makumi mashanu emadhora ekuAmerica. Vakasungwa neChitatu vachipomerwa mhosva yekusazvibata zvine hunhu paruzhinji.
VaMunengiwa vanonzi vakaratidza nhengo yemutezo wavo yechirume kuna VaOriah Kabayanjiri, seneta weUzumba, Maramba Pfungwe, Mudzi, mushure mekunge vaviri ava vakakavadzana. VaMunengiwa vachadzoka kudare musi wa 12 Nyamavhuvhu, apo mhosva yavari kupomerwa ichatanga kutongwa.
Muchuchisi wehurumende, VaAndrew Motsi, vaudza dare kuti VaMunengiwa nemusi wa 2 Nyamavhuvhu pamahofisi ehurumende maMutare, vakakavadzana naVaKabayanjiri nezvebasa reCOPAC. Zvinonzi pakukakavadzana uku, VaMunengiwa vakaudza VaKabayanjiri kuti vasavatore semunhukadzi, vachibva vabudisa nhengo yemutezo wavo yechirume kuna VaKabayanjiri, kuti vaone kuti murume saivo.
VaMotsi vanoti VaMunengiwa vapedza kuita izvi, vakabva vabuda muhofisi ndokuenda panze, nyaya iyi ndokuzomhangarwa kumapurisa, VaMunengiwa ndokubva vasungwa neChitatu.
Ukuwo gurukota rinoona nezvemabasa eparamende pamwe nezvebumbiro remutemo, VaEric Matinenga, vasimuka muHarare vakananga kuManicaland kunogadzisirisa nyaya yekuramwa basa kwenhengo dzezvikwata zviviri zveMDC kwemazuva maviri, zvichitevera kusungwa kweimwe nhengo yeMDC iri mune chimwe chezvikwata zviri kunyora pasi pfungwa dzevanhu pakunyorwa kwebumbiro idzva remutemo wenyika.
Zvichakadaro, mhirizhonga inonzi iri kuitika kuChipinge West, inonzi yasiya vanhu vakawanda vakuvara. Zvinonziwo vasori vanonzi vari kushungurudza nhengo dzeMDC, izvo zvava kupa kuti vanhu vatye kutaura pfungwa dzavo. Mumiriri weMakoni South, VaPishayi Muchauraya, vanoti nhengo dzavo dziri kushungurudzwa.
Mune imwewo nyaya, hutungamiri hweCOPAC hwasangana nemasangano akazvimirira ekuMatabeleland vakazeya zvinetswa zvinonzi zvanga zvichisanganikwa nazvo muhurongwa hwekunzwa pfungwa dzevanhu.
Masachigaro matatu eCOPAC, anoti VaDouglas Mwonzora, VaEdward Mkhosi, pamwe naVaPaul Mangwana, pamwe nevanga vakamirira mapato matatu ari muhurumende, vasangana nenhengo dzeMatabeleland Civil Society Consortium, sangano remubatanidzwa wemasangano akazvimirira muMatabeleland.
Sangano iri rakanga ranyorera COPAC tsamba richiti harisi kufadzwa nemafambiro ari kuita chirongwa chekunyorwa kwebumbiro remitemo mumatunhu aya, zvikuru panyaya yekushambadzwa kwemashoko.
Mumwe wemasachigaro eCOPAC, VaDouglas Mwonzora, vaudza Jonga Kandemiiri weStudio7 kuti vawirirana pane zvose zvavanga vachitaura nezvazvo.
Coordinator weBulawayo Progressive Residents Association, rimwe remasangano ari pasi pemubatanidzwa weMatabeleland Civil Society Consortium, VaRoderick Fayayo, vaudzawo Studio 7 kuti vawirirana kusangana China choga choga, vachirovana masoro.
Zvichakadaro mumwe wemasachigaro eCOPAC, VaPaul Mangwana, vanoti hurongwa hweCOPC huri kufamba zvakanaka. Asi nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, VaEarnest Mudzengi, vanoti hurongwa uhu hausi kufamba zvakanaka nekuti vamwe vanhu vari kutyisidzirwa.
Hurukuro naVaRoderick Fayayo
Nyaya in Loidharm Moyo
Hurukuro naVaPishayi Muchauraya
Hurukuro naVaPaul Mangwana naVaEarnest Mudzengi